Fankafizana manokana : mahazo vahana ny fitiavana ny “miniature” eto Madagasikara | NewsMada
Fankafizana manokana : mahazo vahana ny fitiavana ny “miniature” eto Madagasikara
Tsy fitiavana fotsiny… Fankafizana mihitsy ny an’ireo mpanangona ireo zavatra amin’ny endriny bitika, na ny “miniature”. Efa maro ireo mpankafy, ary manana fikambanana izy ireo.
« Association des passionnées des miniatures », afohezina hoe Aspam. Io no fikambanana ivondronan’ireo mpankafy ireo zavatra amin’ny endriny bitika, na ny « miniature ». Tsy vao izao akory no nisy ny mpankafy, satria efa aman-taonany maro no nanangona ireo zavatra bitika, kanefa mitovy endrika amin’ny tena izy ireo. Nifanentana mba ivondrona ho fikambanana iray kosa, ireo mpankafy mba hifampizara traikefa, hifanampy, hifanome tanana sy hifanampy, mba hahazoan’ny tsirairay izay tena ilainy. Teraka taorian’izay ny fikambanana Aspam, izay tao anatin’ny tambajotra « Facebook » no nanombohany.
Fikambanana tsy miankina fa hatambatry ny fankafizana ny « miniature » ny Aspam. Tarihin’ny birao mpanatanteraka, saingy malalaka kosa ny sehatrasa fa tsy tapitra hatreo amin’ny fifampizarana fotsiny. Efa nisy, ohatra, fampirantiana nataon’ny Aspam, nandritra ny “Salon de l’auto” farany teo, notontosaina teny Ivato ny volana oktobra. Nisy ihany koa nandritra ny Rallye iraisam-pirenena teto Madagasikara, na ny RIM ny volana novambra. Nanaitra ireo mpitsidika marobe ny fampirantiana, satria maro ireo mpankafy, te hanana ihany koa.
Vokatr’izay, manam-pikasana ireo mpikambana ao amin’ny Aspam ny hikarakara fampirantiana hafa, mba hizaran’izy ireo ny fankafizany ho an’ny besinimaro.
Marihina fa tsy manangona sy mitahiry ireo « miniature”, fotsiny ireo mpikambana ao amin’ny Aspam. Manavao, manome endrika hafa, sns, ireo zavatra bitika hangoniny koa izy ireo. Mila fitiavana sy traikefa anefa izany, ka ho an’ireo te hanao izany indrindra ny tetikasan’ny fikambanana manaraka.
Farany, ny fiarakely no tena manavanana ireo mpanangona sy mpankafy “miniature”. Tsy voafetran’izay anefa ny fitiavana ity kanto iray ity, ka misy koa ny “moto”, trano, sns.